Irlandy " Journey-Assist - Mahasoa. Ny lakozia. Attractions.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Irlandy
25 Mey 2020
2 ny fanehoan-kevitra
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Ireland
Irlandy dia firenena nosy any amin'ny Ranomasimbe Atlantika Avaratra.
Sasaina amin'ny ranomasina Irlandy, ny Ranomasimbe Atlantika, ary koa ny St George sy ny Straits North. Ny ankamaroan'ny morontsirak'ilay nosy dia be vato, voazarazaran'ny morontsiraka be (ny lehibe indrindra dia Galway, Shannon, Dingle ary Donegal any andrefana, Lough Foyle any avaratra).
Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia ny Mount Carrauntoohil 1,041 m.
Misy renirano maro any Irlandy (Shannon, Lee, Blackwater, Chur, Nor, Ern, Bann), farihy (Loch Ney, Loch Dern, Loch Mask sy ny hafa) ary ny lemaka (eo amin'ny faritra afovoany). Lakandrano maromaro miampita azy miankandrefana mankany atsinanana (Bolshoi, Korolevskiy, Ulstenskiy, Loganskiy, sns).
Nitifitra ny Tompon'ny Rings, Harry Potter ao amin'ny Trinity College izy ireo, ary ny sambo sambo Titanic dia natsangana tany Irlandy.
Inona no manintona
Irlandey dia manintona mpizahatany avy amin'ny firenena maro noho ny mampiavaka azy. Andao hamantatra izany. Misy zavaboary mahafinaritra miaraka amin'ny ekolojia tsy azo ihodivirana, tontolo iainana isaky ny tsirony, ahidrano emeraoda midadasika miaraka amin'ny ondrilahy mahafinaritra mamolavola azy ireo, tanàn-dehibe fahiny manana làlana tery mifono lalana, fomban-drazana mahaliana, be dia be ny mpankafy fahagola, karazan-java-mavitrika mavitrika, fety sy fifaninanana natao isan-taona, tsara fanahy ary tena olona mahay mandray vahiny, maro ny Pub manana sakafo matsiro sy mahafa-po ary tsotra. Ao Irlanda daholo izany!
Fifanakalozana vola sy fifanakalozana
Ny vola ofisialin'i Irlandy dia ny euro. Azonao atao ihany koa ny mandoa dolara na pounds sterling, na izany aza amin'ny taha tsy dia tsara loatra. Ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny biraon'ny fifanakalozana eo amin'ny gara sy ny seranam-piaramanidina dia tsy mahasoa ny mpizahatany. Ny tsara indrindra dia ny fanovana vola eo afovoan'ny renivohitra, izay misy ny fifaninanana avo noho ny fahabetsahan'ny birao fifanakalozana sy ny banky. Ny tolotra fifanakalozana dia azo atolotra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ihany koa, fa avy eo dia diniho tsara ny haben'ny kaomisiona sy ny tahan'ny. Ny carte de crédit dia be mpitia ihany koa. Tena mety ny manana karatra puce miaraka aminao, satria tsy afaka mandoa karatra misy kasety magnetika ianao na aiza na aiza.
Vanim-potoana any Irlanda
Ny vanim-potoana tsara indrindra mahaliana ny fitsidihana ny firenena dia ny Mey ka hatramin'ny septambra. Ny ora atoandro dia lava ary noho izany dia maro ny trano misokatra ka tara. Ny toetrandro tsara indrindra dia voatahiry; ny fitsidihana ilay firenena miaraka amin'ny fitsangatsanganana dia mahafinaritra tokoa mandritra io vanim-potoana io. Saingy, aza hadino ny manana peratra miaraka aminao (rivotra mahery ao amin'ny nosy - ny elo dia tsy hahavonjy anao raha misy orana), satria ny andro dia somary tsy tanteraka. Ny andro mafana dia afaka soloina ny ranonorana ao anatin'ny minitra vitsy. Mety maharitra hatramin'ny minitra vitsivitsy ka hatramin'ny ora vitsivitsy ny orana. Mey sy septambra no volana tena lafo indrindra ho an'ny serivisy. Teo anelanelan'ny volana jona sy Aogositra, tonga amin'ny fara tampon'izy ireo ny vidiny.
Ny volana novambra no volana mora indrindra ary heverina ho tsy mahafinaritra amin'ny fitsangatsanganana.
Ny volana Desambra ka hatramin'ny tapaky ny volana febroary - ririnina. Mandritra io vanim-potoana io, matetika misy orana sy zavona. Misy tafio-drivotra amin'ny morontsiraka amin'ny rivotra. Ny volana janoary sy febroary no mangatsiaka indrindra volana ao ny taona.
Inona no tokony hatao any Irlandy
Tsidiho ireo zaridainam-pirenena sy ny lapa taloha
Burren National Park, County Clare (Burren)
Newgrage dia nanangana 3000 taona talohan'i SM nanomboka tany, tanimanga, vato ary hazo. Mbola zava-miafina ny tanjony.
Mandraisa anjara amin'ny fetibe, fety ary fialantsasatra
Fety sy andro firavoravoana
Atao mandritra ny taona ny lanonana sy fety amin'ny firenena. Mangina sy mahafinaritra foana foana izy io, miaraka amin'ny dihy sy hira, miaraka amin'ny fampisehoana nataon'ireo mpanakanto sy akrobera, miaraka amin'ny fety falifaly ary fifaninanana isan-karazany amin'ny fihodinana, atao hoe baolina kitra gaelika, izay ilalaovina amin'ny tanana, ny tongotra ary ny sokker (baolina).
ДAndron'i Md No fialan-tsasatra lehibe indrindra any Irlandy, ankalazaina isan-taona ny 17 martsa. Ny olona amin'izao fialan-tsasatra izao dia miakanjo akanjo maitso, manao matso, manao fety amin'ny mozika sy dihy.
Mihinam-bidy ao amin'ny Pub Irlandy tsara, izay milaza fa ny tranainy
Sean's Bar (900 AD), faritany Roscommon
Mandehana mandeha amin'ny alàlan'i Dublin cozy
Manokana fotoana mavitrika
Surfboard tsara indrindra any Irlandy - Bundoran Beach
Ny volana jona ka hatramin'ny aogositra no fotoana be mpitia indrindra amin'ny fivezivezena. Manomboka amin'ny volana septambra dia manomboka ny vanim-potoanan'ny onja avo, izay mahatratra ny tampon'ny volana janoary.
Diving. Miles Reef, County Clare
Ny martsa ka hatramin'ny oktobra no fotoana be mpitia indrindra amin'ny antsitrika. Ny anton'izany dia ny mari-pana amin'ny rano mety indrindra. Azonao atao ny misitrika ny morontsiraka andrefana sy atsinanan'ny firenena.
Diving. Sambo Laurentic
Mandehana mitaingina soavaly
Amin'ny Aogositra, jereo ny hazakazaka soavaly nentim-paharazana. Tralee, County Kerry
Mandehana amin'ny lalana misy an'i Ring of Kerry
Brittes Bay ao amin'ny Wicklow County , Rosnowlach any Donegal County
Ny sakafo Irlandey dia natsangana tamin'ny fomba nentim-paharazana taloha ary tsotra, matsiro, nahafa-po ary somary tsy mahalala fomba. Ny vokatra fambolena (laisoa, ovy, zanak'ondry, henan'omby, vorona, henan-kisoa), ny lalao ary ny hazan-dranomasina dia mbola voahaja tsara. Be mpahandro maro no mijanona ho mahatoky amin'ireo fomban-drazany, satria ny hena kosa dia andrahoina amin'ny afo misokatra, mampiasa andiany fa tsy kitay.
Iza amin'ireo lovia eo an-toerana ilaina andramana dia:
Ny lovia malaza indrindra dia ny Iray Stew
Voankazo masira maintso (Champ)
Kobila Puree (Colcannon)
Saosisy ra no lovia fisakafoanana ankafizin'ny Irlandey
Saosisy amin'ny ra (Puding mainty sy fotsy)
Zavamaniry kambana amidy miaraka amin'ny Bacon (laisoa Fandrarahana Bacon)
Famonoana ovy (Boxty)
Amin'ireo zava-pisotro, ny Irlandy dia tia ny dite betsaka.
Tea (dite Irlandey)
Guinness, Murphy's, Beamish, Jameson Irish whisky ary Baileys liqueur dia isan'ireo zava-pisotro misy alikaola izay omen'ny mponina any an-toerana azy.
Jameson whisky, divay Baileys, labiera Guinness
Azo atao tsara ny manana moka hihinana amin'ny vidiny mirary any amin'ny tranobe haingana na any amin'ny tranobisy eo an-toerana, izay maro ny firenena. Aza adino ny manontany amin'ny mpandroso sakafo amin'ny haben'ny anjara. Ny toerana eto dia tsy kely.
Manapa-kevitra ny hividy vokatra amin'ny tsena sy ny tsenan'ny tantsaha.
Weather in Iranand anio + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Irlanda. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Manome fotoana ny mpizahatany miala sasatra amoron-dranomasina any amin'ny faritra avaratra i Irlandy, mahita trano mimanda maro ary mifankazatra amin'ny sakafo matsiro, indrindra ilay nandrahoana irlandey malaza. Eto ianao dia afaka mandehandeha manodidina an'i Dublin, mahazo trano fisotroana sy klioba any Cork, ary mandehandeha manaraka ny lalana mandeha amin'ny Ring of Kerry. Amin'ny fialam-boly mavitrika any Irlandy, ny mitaingina soavaly dia mandroso tsara.
Ho an'ireo mpandeha eropeana, Irlandy dia toerana fialantsasatra malaza hatrizay. Manolotra programa fitsangatsanganana tena mahaliana sy isan-karazany, labiera matsiro. Misy ny fotoana ahafantarana ny natiora tany am-boalohany sy ny tantaram-pirenena. Vitsy ny mpizahatany tonga eto avy amin'ny firenena any Eropa Atsinanana. Ankoatry ny "olona" be pitsiny izay mividy fitsidihana an'ity firenena ity dia mahaliana ihany koa i Irlandy ho an'ireo mpianatra tonga hianatra anglisy.
Nanafika ny isan'ny lapa i Irlandy, ary koa ireo monasitera sy trano nilaozana, ary koa ny isan'ny angano momba ny troll, lepricons ary mpamosavy voalaza fa mipetraka ao aminy. Na dia manana tanàna taloha aza ity firenena ity misy programa fitsangatsanganana mahaliana dia mbola tokony hoheverina ho manintona Irlandey indrindra ny natiora. Ohatra, ao amin'ny Saikinosin'i Iverag, noforonina lalana mandeha an-tongotra malaza antsoina hoe Ring of Kerry. Mpandeha maro no liana amin'ny harambato - vatolampy misy hahavony hatramin'ny 200 m ary miorina amoron'ny Ranomasimbe Atlantika. Ny endrika voajanahary manintona iray any Irlandy dia ny havoana heathery sy heathlands. Ny trano fandraisam-bahiny Irlandey dia manaraka tanteraka ny fenitry ny "kintana" misy azy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny kalitaon'ny serivisy hôtely eto dia mihoatra ny haavon'ny serivisy amin'ny hotely any Eropa tanibe.
Ny tontolon'ny avaratra any Connemara, ny velaran'i Donegal, ny onja Atlantika ary ny endrik'i Glendalough dia vitsivitsy monja amin'ireo atolotry ity firenena ity ho an'ireo tia mitokantokana. Na izany aza, ireo tia zavakanto dia afaka mahita fialamboly ho an'ny tenany ihany koa. Manana seho mahafinaritra i Dublin, i Limerick dia manao fety miaraka amina mozika rock. Betsaka ny mpizahatany any Irlandy no voasarika amin'ny fahaizan'ny olona mandray vahiny ao an-toerana. Manampy an-tsitrapo eto ny vahiny ary arahi-maso akaiky mba tsy hanahirana na inona na inona. Ny toetra nasionalin'ny Irlandey dia azo lazaina toy izao: ny tena Irlandey mahatsiaro ho mahazo aina rehefa voahodidin'ny olona falifaly izy.
Ilay firenena dia manana karazan-toetr'andro mifehy ny ranomasina. Amin'ny andrefana sy avaratra-andrefana, ny nosy dia nosasan'ny Gulf Stream, izay mafana sy mando ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny, ny toetr'andro Irlanda dia azo antsoina hoe tsy ampoizina. Ny vazivazy dia milaza fa misy “vanim-potoana 4 ao anatin'ny 24 ora”. Maizina ny ankamaroan'ny orana, nefa matetika izy io. Indraindray ny shower sy ny masoandro dia mifandimby imbetsaka mandritra ny iray andro.
Ny isotherms amin'ny ririnina dia eo amin'ny laharana + 4… + 7, ny isotherms amin'ny fahavaratra dia eo amin'ny faritra + 16… + 21. Ny ririnina eto amin'ity firenena ity dia mafana sy mando, tena mahalana ny lanezy. Amin'ny salan'isa, ny maripanan'ny ranomasina amin'ny ririnina dia manomboka amin'ny +6 ka hatramin'ny +10, amin'ny fahavaratra - hatramin'ny +12 ka hatramin'ny +17. Amin'ny vanin-taona ririnina dia manomboka mihamaizina eo amin'ny 17 ora eo ho eo.
Ny vanim-potoana tsara indrindra handehanana any Irlandy dia ny Jolay-Aogositra. Saingy amin'ny volana Jona sy septambra dia misy ihany koa ny antony hahatongavana eto - mandritra ireo volana ireo dia mafana be ny toetrandro, azo zahana ny fitsangatsanganana rehetra, saingy vitsy kokoa ny vahoaka.
Taorian'ny fanamboarana ny lalana any Irlandy, dia niha nihena ny fangatahana fitsangatsanganana an-trano. Ankehitriny ny sidina an-trano dia tsy mifandray afa-tsy Dublin, Donegal ary Kerry.
Ny tamba-jotra Irlandiana Bus mitondra bus dia mampifandray ny ankamaroan'ny toeram-ponenana ao amin'ny firenena. Misy fiara maintso 2-rihana eto Dublin. Ny fividianana tapakila dia azo atao amin'ny mpamily. Misy fihenam-bidy isan-karazany ho an'ny fandoavam-bola amin'ny tapakila manomboka amin'ny 1 andro ka hatramin'ny 1 volana, ary fihenam-bidy ho an'ny fitsangatsanganana sasany. Misy fihenam-bidy amin'ny tapakila tapakila fiarabe sy fiarandalamby. Ny tapakila toy izany dia ahafahanao mitety ny firenena amin'ny bus sy fiaran-dalamby ao anatin'ny 5-8 andro.
Mampifandray ireo tanàna Irlandey rehetra ny lalamby. Ny kalesin'ny fiarandalamby dia madio, milamina ary mizara ho kilasy 2: "standard" sy "super standard".
Afaka mandeha eny amin'ny Nosy Aran ianao amin'ny alàlan'ny serivisy serivisy mahazatra (rehefa tsy misy tafio-drivotra any an-dranomasina), na avy ao amin'ny seranan'i Rossavil. Mbola manao fitaterana matetika tsy tapaka. Aranmore avy any Donegal ary momba ny. Inishbofin avy any Galway.
Ao Irlandy, ny mpizahatany manana varotra be dia be. Eto amidy amin'ny toerana maro ny vokatra avy amin'ny marika malaza any Eropa, ary koa ny vokatra azo avy amin'ny famokarana eto an-toerana. Eto amin'ity firenena ity, ny vokatra vita amin'ny volon-tsoavaly avo lenta dia atao izay raisina mifanaraka amin'ny làlana. Matetika no sweaters sy ponchos. Ny mpitsangatsangana dia manoro hevitra ny hiditra ao amin'ny tsenan'i Irlandy hividy mofomamy amin'ny alàlan'ny akanjo manokana. Tena tsara eto dia mahavita manao zavatra amin'ny cashmere. Ny orinasa Blarney dia miasa ao amin'ny firenena, mamokatra sy mivarotra vokatra mandoa vola amin'ny vidiny mirary. Ao amin'ny Nosy Aran, dia afaka mividy sweater miaraka amin'ny tenona am-boalohany, izay toa braids.
Vokatra Irlandy maro loko hafa koa ny whisky. Whisky, noforonina teto amin'ity firenena ity, dia be fangatahana eran'izao tontolo izao noho ny habetsahan'ny olona Irlandey monina ivelan'ny Irlandy, fa ny tsirony manokana ihany koa. Ny mpanamboatra malaza indrindra dia i Jameson sy Bushmills. Ny faritra dia ahitana malky tokana, mifangaro, whisky madio ary tokana. Ny fanasokajiana dia mifototra amin'ny firafitry ny vokatra. Soso-kevitra ny hisotro an'io zava-pisotro io ao anaty trano fisotroana kafe, izay mamiratra sy manankarena kokoa ny tsirony, ary noho ny rivo-piainana milamina dia afaka mankafy azy tanteraka ianao. Afaka mividy whisky iray tavoahangy ianao ho entinao any amin'ny fivarotana lehibe rehetra.
Sokajy iray hafa an'ny vokatra Irlandey tokana dia fitaratra sy kristaly ary seramika. Vokatra fitaratra amin'ny marika manerantany no vokarina eto amin'ity firenena ity. Izy io dia miavaka noho ny fahatsorany sy ny fahasoavana. Ny vokatra seramika dia tsy malaza noho ny kristaly sy ny fitaratra.
Ny tena mampiavaka ny sakafo Irlandey dia fitiavana lehibe ny vahoakan'i Irlandy ho an'ny hena sy ovy. Toerana iray lehibe dia notahirizin'ny lovia ovy sy laisoa. Ireo vokatra 2 ireo no fototry ny lovia maro eto amin'ny firenena.
Amin'ny ankapobeny, ny nahandro eo an-toerana dia zara raha mampiavaka ny fahaizany sy ny fahaizany mandanjalanja. Ny fananany lehibe dia ny voky. Ny antony dia ny toe-piainana sarotra izay tsy maintsy niainan'ny Irlandey. Vokatr'izany, ny hena sy trondro matavy no mitana ny toerana lehibe indrindra amin'ny sakafo nasionaly. Ary ovy no ampiasaina matetika ho lovia.
Ny sakafo malaza indrindra amin'ny sakafo Irlandey nentim-paharazana dia ny bacon, ny saosisy ary ny saosisy, atolotra miaraka amin'ny toast sy atody atody, indraindray koa miaraka amin'ny tsaramaso. Vokatra mahazatra be dia be ny pudding mainty, izay saosisy mihosin-dra ary misy oat sy / na grady orza. Ny mpizahatany sasany dia tsy faly amin'ny pudding mainty, fa olona Irlandey maro no vonona hihinana azy io ho an'ny sakafo maraina. Ity vokatra ity dia mety misy, ankoatry ny ra, serealy ary ny any anaty tany, koa ny turmerika, anana ary fromazy. Ho an'ny vegetarian, ny sakafo nentim-paharazana Irlandey dia misy atody, pancakes, voatabia ary holatra. Raha ny fanazavana, ny holatra koa dia vokatra tena lehibe any Irlandy. Ahitana lovia holatra ao amin'ny trano fisakafoanana sy kafe rehetra eto amin'ity firenena ity.
Trano fisakafoanana maro any Irlandy no manolotra lovia tena izy toy ny Dublin Lawyer. Havoana namboarina tamin'ny crème. Ity firenena ity koa dia mandray fety oyster misy lohahevitra. Mandritra ny fankalazana dia mihinana labiera an-jatony litatra amin'ireo akorandriaka ireo ny Irlandey. Mandritra izany fotoana izany dia zara raha misy ny trondro amin'ny sakafo Irlandey.
Lovia Irlandey malaza iray hafa dia ny coddle, izay misy saosisy, ovy, bacon ary legioma. Taloha, raha mbola tsy nisy ovy tany Irlandy, dia nampiasaina ho an'ny coddle ny orza.
Ary lovia nasionaly iray hafa izay nanjary nalaza tany ivelan'ny firenena ity dia ny sakafom-pisakafoanana Irlandey. Tsy misy na iray aza fomba fahandro. Io laoka io dia voaomana amin'ny fomba hafa amin'ny fianakaviana samihafa. Ny safidy tsotra indrindra dia ny zanak'ondry (na zanak'ondry), ovy, tongolo, karaoty, ary anana.
Coat of arm Ireland
Fomba fitantanan'ny governemanta: Repoblika parlemantera
Fivavahana: Firenena miafina. Fivavahana Katolika
Fiteny: Iraniana. Anglisy.
Traffic: Lafiny ankavia
Kaody finday: 353 +
Sehatra Internet: .ie
Nahasarika ahy hatrany ity firenena ity. Hitsidika ilay "akaiky indrindra" tokoa aho)
Misaotra noho ny votoaty mampahafantatra sy mahaliana ho an'ny mpanoratra! Taorian'ny olom-pantatro dia te-hahita Irlandy bebe kokoa aho.
Tiako ihany koa).
Toa tamin'ny volana Aogositra-Septambra no fotoana tsara indrindra hitsidihana azy. Ny sisintany ihany no hanokatra ny zava-drehetra.